ट्रम्प–किम वार्ता र अपेक्षा – Rajdhani Daily
ट्रम्प–किम वार्ता र अपेक्षा
उत्तर–कोरिया र दक्षिण–कोरियाका शीर्ष नेताबीच २७ अप्रिलमा सीमावर्ती दक्षिण कोरियाली सहर पानमोनजोमा शिखर वार्ता भयो । सम्पन्न शिखरवार्तामा कोरिया प्रायद्वीपमा सधैंका लागि युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भयो । सोसम्बन्धी सम्झौतामा यसै वर्ष हस्ताक्षर गरिने पनि दुई नेताबीच सहमति भयो । स्मरणीय छ, सन् १९५० देखि ५३ सम्म दुई मुलुकबीच युद्ध भएकोमा युद्धविराम भए पनि शान्ति सम्झौता नभएकाले दुई मुलुकबीच एकप्रकारको युद्ध जारी नै थियो । दुई मुलुक एकअर्काप्रति असहिष्णु थिए । यस किसिमको परिस्थितिमा यस वार्तामा भएका सहमतिले विश्वलाई नै उत्साहित बनायो र दुई कोरियाबीचको शान्ति सम्झौताले विश्व शान्तिमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षासमेत गरियो ।
कोरियाली युद्ध भएपछि पहिलोपटक ६५ वर्षपछि उत्तर र दक्षिण कोरियाका शीर्ष नेताबीच यस किसिमको भेटघाट भएको थियो । यसकारण यसलाई ऐतिहासिक ठानियो । यसअघि दुई मुलुकका शीर्ष नेतृत्वबीच २००२ र २००७ मा भेट भए पनि कुनै सहमति भएको थिएन । यसपालि दक्षिण कोरिया पुगेका उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनबीच कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक अस्त्रमुक्त क्षेत्र बनाउने सहमति पनि भएको थियो । सो क्रममा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र यसै वर्ष दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
यो भेट र सहमतिलाई दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधारको दिशामा ठूलो फड्को तथा शान्ति र मेलमिलापका लागि महŒवपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको थियो । कोरियाली युद्धपछि विभाजित कोरियाको सीमा क्षेत्रस्थित दक्षिण कोरियाको पानमोनजोम शिखर भेटपछि वार्ता र छलफललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । शिखर वार्तापछि जारी घोषणापत्रमा शिखर वार्ताका क्रममा भएका सम्झौता लागू गर्नका लागि नियमित रूपमा उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने, कोरियाली युद्धका क्रममा बिछोडिएका परिवारको भेटघाटका लागि सीमामा संयुक्त भेटघाट कार्यालय स्थापना गर्ने, दुई देशबीच सहयोग तथा उच्चस्तरीय भेटघाटलाई प्रोत्साहन गर्ने सहमति हुनुका साथै दुई नेताबीच २०१८ मा आयोजना हुने एसियाली खेलसमेत अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा संयुक्त सहभागिता जनाउने, सहमति पनि भएको छ ।
उत्तर कोरियाली नेता किमले वार्ता भएकै दिन पहिलोपटक सोही दिन दक्षिण कोरियाको भूमिमा पाइला राखेका थिए । सोही क्रममा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति इनको सवाल थियो, ‘तपाईंले त दक्षिण कोरियाको भूमि टेक्नु भो, मैले कहिले टेक्ने ?’ किमले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई आफ्नो भूमि टेकाएका थिए र अनुकूल मिलाएर प्योङयाङ निम्त्याउने जनाएका थिए । वार्तापछि किमले आफू एक नयाँ इतिहास प्रारम्भ गर्न आएको बताएका थिए । साथै, उनले कोरियाली प्रायद्वीपको दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास दोहोरिन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पनि आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताएका थिए । यसअघि केही महिना पहिले उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको थियो भने गत वर्ष छैटौंपटक परमाणु परीक्षण गरेको थियो, जसले कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्धको सन्त्रास व्याप्त थियो ।
यसलाई शान्तिपूर्ण युग प्रारम्भको बिन्दुमा एउटा नयाँ इतिहास सुरु भएको ठानिएको छ । यो भेट र वार्ताप्रति विश्वकै चासो थियो । दुई कोरियाबीच ऐतिहासिक शिखरवार्ता सफल भएकोमा चीन, अमेरिकालगायत मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेका थिए । दशकौंदेखिको शत्रुता अन्त्य गर्दै शान्ति र मेलमिलापको बाटो लिनु सन्तोषको विषय हो । यस क्रममा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के भयो भने दुई मुलुकबीच मेलमिलापका साथै कोरियाली प्रायद्वीपलाई नै सम्पूर्ण रूपमा परमाणु अस्त्रमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
उत्तर कोरिया विश्व समुदायबाट एकप्रकारले एक्लो छ । सीमित मुलुकसँग मात्र उसको सम्बन्ध छ । संयुक्तराज्य अमेरिकालाई समेत चुनौती दिने उत्तर कोरियाले गत वर्ष त जापानलाई समुद्रमा डुबाइदिने र अमेरिकालाई खरानी बनाइदिने चेतावनी नै दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा शक्ति राष्ट्रहरूको अनुरोधविपरीत अटेर गर्दै उसले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको थियो । पछिल्लो हिउँदे ओलम्पिक खेलको सन्दर्भमा दुई कोरियाबीच भएको वार्ताले सम्बन्ध नजिकिएको र यो शीर्ष भेटघाट त्यसपछिको विकसित घटनाक्रमकै परिणाम हो भन्ने ठानिएको छ ।
यो भेटघाट र वार्तापछि चर्चामा रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच जेनेभामा वार्ता हुने सम्भावना बढेको अनुमान गरिएको थियो । कोरियाली प्रायद्वीपमा विद्यमान उत्तर कोरियाली सन्त्रासकै कारण अमेरिकाले दक्षिण कोरियासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएकोमा यसपटक विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दै त्यसको अवधि पनि छोट्याएको थियो । स्मरणीय छ, यो भेटघाटअघि दुई मुलुकका शीर्ष नेताबीच सीधा सम्पर्कका लागि ‘हटलाइन’ सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो । यसअघि हिउँदे ओलम्पिक खेलको सन्दर्भमा किमले आफ्नी बहिनीलाई दक्षिण कोरिया पठाएका थिए ।
एकाएक किमको सोचाइमा किन यस्तो परिवर्तन आयो ? के उनले समयको आवाज बुझेका हुन् ? खुलापन स्वीकार गर्न चाहेका हुन् ? तानाशाहको छवि परिवर्तन गरेर शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षपाती हुन एकाएक कुन चीजले प्रेरित ग¥यो होला ? धेरै प्रश्न एकसाथ उठेका छन् । कारण जेसुकै भए पनि अब एक्लो बाँच्न सकिन्नँ, विश्व समुदायसँग मिल्नैपर्ने भावना उनमा आएको देखिन्छ । यो वार्ताअघि किमले अब कुनै परमाणु परीक्षण नगर्ने घोषणा गरेका थिए, यसको विश्वले स्वागत गरेको थियो ।
एकाएक किमको सोचाइमा किन यस्तो परिवर्तन आयो ? के उनले समयको आवाज बुझेका हुन् ? खुलापन स्वीकार गर्न चाहेका हुन् ? तानाशाहको छवि परिवर्तन गरेर शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षपाती हुन एकाएक कुन चीजले प्रेरित ग¥यो होला
यसैबीच कोरियाली नेताले चीनको भ्रमण गरे भने सिंगापुरमा जुन १२ (आज) मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाली शासक किम जोङ उनबीच बहुप्रतिक्षित भेटवार्ता हुने निर्णय भयो । यसको जानकारी स्वयं ट्रम्पले ट्वीट गर्दै दिएका थिए । यसअघि अमेरिका र कोरियाबीचको प्रस्तावित शिखरवार्ताको सम्बन्धमा छलफल गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओ उत्तर कोरिया गएका थिए भने त्यस लगत्तै कोरियाले तीन अमेरिकी बन्धकलाई रिहा गरेको थियो । यसको ट्रम्पले स्वागत गरेका थिए । गत वर्ष उत्तर कोरियाको परमाणु तथा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण कार्यक्रमलाई लिएर किम र ट्रम्पले एकअर्कालाई अपमानित गर्दै युद्धकै चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
ट्रम्पले आफ्नो कोरियासँगको अमेरिकी सम्बन्ध सुधारको क्रममा रहेको र सुध्रने धारणा बताएका थिए । उनले अगाडि के कस्तो हुँदै जान्छ हेरौं भन्दै यो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र सम्पूर्ण विश्वकै लागि सुखद र राम्रो हुने पनि बताएका थिए । अप्रिलमा उत्तर कोरियाली नेता किम र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको भेटमा दुबै नेताले कोरियाली प्रायद्वीपलाई परमाणु अस्त्रमुक्त बनाउन समान लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दुई कोरियाले सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने र दुवै मुलुकले एक अर्काविरुद्ध कुनै किसिमको प्रचारबाजी नगर्ने पनि सहमति गरेका थिए ।
तर एकाएक परिस्थिति बिग्रियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प तथा त्यहाँका अन्य नेताको अभिव्यक्तिले उत्तर कोरियाली नेता किम भड्किए । दक्षिण कोरियासँग आफ्नो सम्झौता भइरहे पनि अमेरिकाले विभिन्न किसिमले दबाब दिन थालेपछि उनी आक्रोशित भए र वार्ताप्रति आशंका उत्पन्न भयो । लगभग नहुने स्थितिमा पुगिसकेको वार्ता कूटनीतिक प्रयासपछि अन्ततः सिंगापुरमा हुने तय भयो । आजै हुन लागेको यो वार्तालाई विश्वले नै विशेष चासो साथ हेरिरहेको छ । ट्रम्पसँगको वार्ताको दिन नजिकिंदै जाँदा किमले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै रक्षामन्त्री परिवर्तन गरे भने सैनिक प्रमुख हटाउनुका साथै सुरक्षा अधिकारीको फेरबदल पनि गरे ।
वार्ताको मिति तय हुँदै गर्दा किमले पहिलोपटक विदेशयात्रा गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई भेटेका थिए भने पछिल्लो समय आफ्नो ध्यान मुलुकको अर्थव्यवस्थामा हुने बताउन थालेका छन् । कोरियामा विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक भ्रमण हुन थालेका छन् । किमलाई भेट्न चाहने नेताहरूको संख्या बढ्दो छ । यसले कोरियालाई बिस्तारै खुला र बाह्य संसारसँग निकट गराउनेछ र आशा गरौं, कोरियाली नागरिकले मौलिक हक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा अन्य लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्ने वातावरण बन्नेछ । किमका पछिल्ला कदमले कोरिया बाहिरी विश्वसँग जोडिन चाहेको, खुला तथा उदार व्यवस्था अपनाउन र मुलुकलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशातर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियी नेताबीचको पहिलो शिखरवार्ता हो ।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिंगापुर वार्ता सफल भयो भने किम जोङ उनलाई ह्वाइटहाउस निम्त्याउने बताएका छन् । सिंगापुरको सेन्तोसा टापुस्थित पाँचतारे ‘क्यापिला’ होटलमा हुने वार्तामा कुन विषयमा छलफल हुने भन्नेबारे दुई दिन अघिसम्म पनि प्रस्ट पारिएको छैन । तर अमेरिका उत्तर कोरियाले परमाणु कार्यक्रम बन्द गरोस् भन्ने चाहने भएकाले मूलतः दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तथा परमाणु कार्यक्रमकै विषयमा छलफल हुने र कोरियाले नयाँ दिशातर्फ अग्रसर हुन तयार रहने अनुमान गरिएको छ । वार्ताको परिणाम तत्कालै ननिस्के पनि यहाँबाट प्रारम्भ भएको भेटघाट र वार्ता लामो समयसम्म चल्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।दुई कोरियाबीच सम्पन्न वार्ता तथा भएका सहमति र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उत्तर कोरियाली नेतृत्वबीच हुन लागेको वार्ताले विश्व शान्तिको दिशामा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आशा गरौं, यो वार्ता युद्धको सन्त्रासबाट मुक्त शान्तिपूर्ण विश्वको सुनिश्चितताका लागि एक कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।